cat & Mouse is a 5 esondweni, 9 payline izithelo machine game etholakalayo at mFortune Casino. Umdlalo zihlanganisa izimpawu fun efana empunga igundane, ikati brown, ikati negundane uphawu isikhwama, a mousetrap futhi shizi, kanye lenani eliphakeme sidlala amakhadi. Kukhona futhi umklomelo emizileni ezine ezibangela le cat nokujaha igundane futhi okukuvumela ukuba ukunqoba nemadlana. Ngaphezu kwalokho, the game kuhlanganisa amatshwayo zasendle, izimpawu chitha, multipliers, osebenzisa free kanye jackpot.
Play Cat & Mouse at Casino Zethu Kunconywe
Indlela ukudlala umdlalo
Njengoba Cat & Mouse iyisithelo umshini umdlalo, umdlalo olula ukuze ufunde indlela ukudlala. Ungakwazi ukudlala for fun ukuze uthole umuzwa umdlalo noma ukudlala for imali yangempela ukuqala ngokuwina Ngokuphazima kweso. Ukuze uqale umdlalo ungafaka ukubheja okungaba njengoba low 10p.
Igundane yiyona izimpawu sasendle lapho azithathi yimuphi namanye amatshwayo, ngaphandle itshwayo chitha noma uphawu ibhonasi umdlalo ukuqedela inhlanganisela lokuwina.
Ikati liwuphawu chitha. Uma spin ezintathu noma ngaphezulu izimpawu chitha on line eyodwa uzobe ukhishwa osebenzisa khulula.
Isikhwama wekati negundane imali liwuphawu jackpot futhi uma sijikeleza ezinhlanu zalezi on an payline asebenzayo, uzobe ukhishwa lonke jackpot.
Uma spin izimbobo ezimbili noma ngaphezulu igundane on an payline asebenzayo, uyongena game ibhonasi. You iyothathwa ibhodi nokudlala nge seligundvwane cat. Uzodinga ukuthi unikezele idayisi ngomzamo ukuba agcine ngaphambi igundane of the cat. Uyokuphumelela ngokusho segcekeni ufike futhi ubude besikhathi ukuphatha ukugcina igundane ngaphambi cat. Ungakwazi ukunqoba ukukhokhelwa enkulu kule game.